ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ သည် နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
၂၀၀၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ၅၅/၇၆ က ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့အဖြစ် ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အထွေထွေညီလာခံက ၂၀၀၁ သည် ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သော ၅၀ နှစ်မြောက် ကွန်ဗင်းရှင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်များအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်းကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ 
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက အာဖရိကဒုက္ခသည်များနေ့ကို နိုင်ငံအတော်များများတွင် တရားဝင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂက မှတ်ချက်ပြုရာတွင် အာဖရိကသမဂ္ဂ (OAU) မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များနေ့သည် အာဖရိကဒုက္ခသည်နေ့နှင့် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တိုက်ဆိုင်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ကမ္ဘာ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ဒုက္ခသည်များနေ့ကို ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပီးယပ်စ် ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
အာရုံစိုက်ပေးရန် လိုအပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များအရေအတွက် နှစ်စဉ်တိုးတက်လာပုံပြ ဇယား
ကုလသမဂ္ဂတွင် နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့၌ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (UNHCR) နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မရေမတွက်နိုင်သော လူထုအုပ်စုများက ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ကို ကျင်းပခဲ့ကြပြီး စစ်ပွဲများ၊ ပဋိပက္ခများနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကြောင့် နေအိမ်မှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအိုးအိမ်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် အများပြည်သူက အာရုံပြုလာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အစိုးရအရာရှိများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများ၊ ကျော်ကြားသူများ၊ အရပ်သားများနှင့် အတင်းအဓမ္မအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ အဖြစ်အပျက်များစွာဖြင့် မှတ်သားထားသည်။
UNHCR မှ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့၌ သတင်းစကားများကို ထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖိလစ်ဂရန်းသန်းပေါင်းများစွာသောအတင်းအဓမ္မအိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူများကို"ကျော်ဖြတ်ရန်သာမက တိုးတက်ရန်အတွက်" ကူညီရန်သူတတ်နိုင်သမျှအားလုံးကို ကတိပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၈ - ယနေ့ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့သည်ဒုက္ခသည်များနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်
UNHCR မှ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်နေ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီအတွက် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု သတ်မှတ်သည်။ 
၂၀၂၀ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို ရေတွက်သည်
၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် ခြေလှမ်းလှမ်းပါ
၂၀၁၈ ခုနှစ်ယခင်ကထက်ပို၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုက္ခသည်များနှင့်အတူရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်
၂၀၁၃ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသောမိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန် ၁ မိနစ်အချိန်ယူပါ
တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ဒေသတွင်းရှိ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ဗီဒီယိုများ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းနှင့် လူမှုမီဒီယာများမှ ဒုက္ခသည်များအား အသိပညာပေးခြင်းများအားဖြင့် ထိုနေ့ရက်ကို မှတ်သားရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
↑ 2008-09-04 တွင် စစ်ဆေးပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ World Refugee Day 2019 – History, Themes and Quotes။ The earthreminder။ 20 June 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကုလသမဂ္ဂ General Assembly အစည်းအဝေးများ 55 Resolution 76. A/RES/55/764December 2000. 2008-09-04 တွင် စစ်ဆေးပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့&oldid=527507" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။